မွေးနေ့လုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ~ NPNGMyanmarP
2:26 AM NPNG(MyanmarP)
ယခင်က မွေးနေ့လုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ကောင်းကောင်းမသိခဲ့ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် မွေးနေ့တွင် ပျော်ပါးခြင်းတွေဖြင့်သာ အချိန်ကုန်ခဲ့လေ၏။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဒီနေ့မွေးနေ့ရှိသည်ဟု ပြောလာတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ဆီလာပြီး ဖိတ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်း ဒီနေ့ငါ့မွေးနေ့ ခေါက်ဆွဲကြော်၊ ကြာဇံကြော်၊ အုန်းထမင်း စသောအစားအစာများထဲမှ တစ်ခုခုဖြင့် ဧည့်ခံမယ်ပေါ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် အလှူအတန်းကတော့ ရက်ရောတာ ပြောစရာလိုမယ် မထင်ဘူး။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်က အချိန်မေးလိုက်တယ်… ဘယ်ချိန်လဲဆိုတော့ ညနေပိုင်းတဲ့။
ကျွန်တော်သွားခဲ့ပါတယ်… အဲဒီပွဲမှာ အသောက်အစားပါတာမို့ စကားသွက်ကြတာ မစမ်းတော့ပါ။ နဂိုစကားတစ်လုံးမှ ၀င်မပြောတတ်တဲ့ ငတုံးကလည်း ပြောချင်တာပြောပေါ့လေ။ မွေးနေ့ရှင်ကလည်း သူငယ်ချင်းတွေကို ပျော်စေချင်တဲ့ စိတ်အပြည့်ရှိပုံရပါတယ်။ လိုလေသေးမရှိအောင် အကုန်လုပ်ပေးပါတယ်။ စကားလေး တပြောပြောနဲ့ စလိုက်တာ ဘာမဟုတ်တဲ့ ဘောလုံးပွဲနဲ့မှ ပြဿနာဖြစ်ကြလေရဲ့။ အဲဒီကနေ အမေရိကန် သမ္မတ ဘားရခ် အိုဘားမားမှာ သားသမီး ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲပေါ့နော်… အိုဘားမားမိန်းမက ချောလား စသည်အားဖြင့် လျှောက်ပြောလာတော့ တစ်ဖက်က မဖြေနိုင်တော့ဘူး။ ဟိုတစ်ယောက်က ဖတ်ထားတယ် ထင်တယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်က ၀င်မေးကြည့်တယ် ကလေး ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ…??? သူကပြန်ဖြေတယ်ဗျ… နှစ်ယောက်တဲ့… မိန်းကလေးတွေပဲ။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူးပေါ့ သူကဖတ်ထား မယ်လို့ယူဆရတော့ ကိုယ်လည်းဘာမှ ပြန်မငြင်းခဲ့ပေ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ပြန်ပြောလိုက်တယ် အဲဒါက မယားကြီးနဲ့လား မယားငယ်နဲ့လား…?? လို့ သူ့စိတ်ကို ဇဝေဇ၀ါဖြစ်အောင် စလိုက်တာပါ။ တကယ်တော့ အိုဘားမားမှာ မယားတစ်ယောက်ထဲ ရှိချင်ရှိလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်လည်း မသိပါဘူး။ ငါတော့ မယားနှစ်ယောက် ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမဖတ်ဖူးဘူးတဲ့…. မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်လို့ သူကပြန်ပြောပါတယ်။ အဲဒီချိန်မှာ အစောပိုင်းက မဖြေနိုင်တဲ့ တစ်ယောက်က ဘာထပြောတယ် ထင်သလဲ…? မင်းကလဲ ယုံလိုက်စမ်းပါတဲ့… မင်းကိုငါပြန်မေးမယ်တဲ့ ငါ့မှာ ကလေးဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ မင်းသိလားတဲ့….??? ဟင်းအင်း မသိဘူးဆိုတော့မှ ပြောလိုက်တာက ဒီလိုလေးပါ အေး…မင်းညီမနဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်းရတာ သုံးယောက်ရှိပြီး မှတ်ပြီးလား… အဲဒီမှာ စကားများ ရန်ဖြစ်လိုက်တာ ထိုးမယ်ကြိတ်မယ်ဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့လည်း လူစုခွဲပြီး ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။ ဒါဟာ ဘယ်ကနေ စတာလဲဆိုတော့ မွေးနေ့ပွဲရဲ့ ရလဒ်ပဲ… ညနေပိုင်းလုပ်တဲ့အတွက် အရက်ပါတယ်။ ထိုအတွက်ကြောင့် အပျော်ကနေအပျက် ဖြစ်တက်တယ်ဆိုတာကို ဒီဖြစ်စဉ်လေးနဲ့ ရှင်းပြလိုက်ရတာပါ။ အားလုံး ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ။
နောက်တစ်ချက်က စာဖတ်သူတွေကို ကျွန်တော်စေတနာနဲ့ ပြောပြချင်ပါတယ်။ မွေးနေ့မှာ ကျွေးမွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလှူအတန်းလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်မည့်အရာအားလုံးကို မနက်ပိုင်းမှာသာ လုပ်စေချင်ပါတယ်။ ညနေပိုင်း လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်း သောက်စားမည့် အစီအစဉ်မပါတာ ပိုကောင်းပါမည်။ များသောအားဖြင့် မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်… စိတ်မချမ်းသာစရာတွေလည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ တချို့တွေက အရက်သောက်ချင်ကြ၍ တောင်းတတဲ့အခါ မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ကမလိုက်လျှောရင် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ညနေပိုင်း မလုပ်စေချင်တာပါ။ ကိုယ်ကစေတနာ မှန်ပေမယ့်… အချိန်အခါကိုလိုက်ပြီး ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ လူတွေရဲ့ စိတ်သဘောထားကိုလဲ နားလည်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ မနက်ပိုင်းလုပ်တဲ့အတွက် အားလုံးကောင်းပါတယ်။ ညနေမှာ အရက်သောက်မယ့် လူမျိုးတွေကို မနက်ပိုင်းမိမိမွေးနေ့ ဆွမ်းကပ်တဲ့အချိန်မှာ ရအောင်ခေါ်ပြီး တရားနာခိုင်းလိုက်စမ်းပါ။ မိမိလည်းကုသိုလ်ရမယ်၊ သူလည်းကုသိုလ်ရမယ်၊ နားတဲ့တရား ကောင်းလေလေ (သို့) အားစိုက်ပြီး နားထောင်လိုက်မယ် ဆိုရင်လေ ညနေမှာ အရက်သောက်မယ်လို့ ထပ်ပြောဦးမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ မနက်ပိုင်းလုပ်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်နေ့လောက်တော့ ကြိုပြင်ဆင်ရမှာပေါ့။ လူအများအတွက် ဒါနပြုရင် ကာယကံရှင်ကတော့ ပင်ပန်းမှာပဲ။ ဒါကိုထည့်မတွက်ပါနဲ့… ကုသိုလ်တရားကိုသာ ထည့်တွက်စေချင်ပါသည်။ ကောင်းတာလုပ်မည့် သူတိုင်းကို ပံ့ပိုးကူညီမည့် သူတော်ကောင်းတွေ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမြဲတမ်း ရှိနေတတ်တယ် ဆိုတာကို သိထားစေချင်ပါတယ်။
မွေးနေ့ပွဲတွေမှာ ညပိုင်းလုပ်တဲ့ မွေးနေ့ပွဲတွေဟာ အင်မတန် ဆိုးရွားလွန်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မည်သူ့ကိုမှ ပုတ်ခတ်ပြောဆိုခြင်း မဟုတ်ရပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ခေတ်မှီလာတာက အနည်းငယ်ပါ။ အတုခိုးတာတွေက အရမ်းများနေတယ်။ ရွာမှာမွေးနေ့ဆို ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဆွမ်းကပ်၊ ဥပုဒ်သီလဆောက်တည် တစ်ရွာလုံးကျွေးတဲ့ အစဉ်အလာကောင်းတွေကို ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ထိန်းသိမ်းထားစေချင်ပါသည်။ အခုခေတ်က ရွာကနေမြို့မှာ ကျောင်းလာတက်တယ်။ မြို့မှာ သူများလုပ်သလို လိုက်လုပ်ကြတယ်။ ရွာမှာမွေးနေ့ပွဲ တစ်ခါမှ မလုပ်တဲ့သူကလည်း မွေးနေ့ပွဲတွေ ကျင်းပ၊ ခန်းမတွေဘာတွေ ဌား၊ သူငယ်ချင်းတွေ ခေါ်ပြီး ပျော်ရွှင်နေလိုက်ကြတာ။ ညဘက်မှာလည်း တစ်ဝိုင်းရှိအုံးမယ် ဆိုတာက ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ မြင်တွေ့နေရတာပဲ အထူးသဖြင့် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကို အသိဥာဏ် ဗဟုသုတ တိုးစေတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေမှာလဲ များသောအားဖြင့် ပိုက်ဆံရှိ အဆင့်အတန်းလောက်ဆို ညစာစားပွဲနှင့် တည့်ခင်းဧည့်ခံပါမည်။ ရက္မာလေ နဲနဲဝင်တော့ မှားသွားတဲ့ အခန်းလေးတွေ ပါအုံးမယ်။ ဒီ(၂၀)ရာစုနောက်ပိုင်း အရက်သောက်တဲ့ အထဲမှာ မိန်းကလေးတွေ အနည်းစုပါဝင်မည် ဟုဆိုလျှင် ကျွန်တော်မှားမယ် မထင်ပါ။ အတုမြင်အတတ်သင် ဆိုပေမယ့်၊ ဘုရားသွား ကျောင်းကန်ဆောက်နေတဲ့ သရုပ်ပြ ရုပ်ရှင် ကားကြီးတွေကိုလည်း မေ့မသွားကြဖို့ သတိပေးစေလိုပါသည်။ သူများလူမျိုးနဲ့ မနှိုင်းစမ်းပါနဲ့ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဗီဇနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို တန်ဖိုးထားကြပါ။
အခုခေတ် မိန်းကလေးတွေ အရက်သောက်တာ မစမ်းဘူးလို့ ပြောနေကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေအတွက် စမ်းကိုစမ်းနေရမှာ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် အရက်သောက်တာဟာ ထူးထူးစမ်းစမ်းကို ဖြစ်နေရပါတယ်။ အရက်ကလည်း အရည်ထဲပါတာပဲ။ ယောင်္ကျားသောက် မိန်းမသောက်လို့တော့ ခွဲထားတာ ဘယ်ရှိမလဲ။ မိန်းမကောင်းအင်္ဂါ (၆၄) ရပ်နဲ့ နေရမယ်မပြောပါဘူး။ မိန်းမတို့၏ ကောင်းခြင်း(၅)ဖြာ ထဲတော့ ဘယ်ပါတော့မလဲ။ မိန်းကလေးတွေ အရက်သောက်ပြီး မှုးနေတာကို မြင်ရတာ စိတ်မချမ်းသာစရာပါ။ စဉ်းစားကြည့်ရင် လွယ်လွယ်လေးပါ။ ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက် အရက်မှုးလို့ ကူညီမယ်ဆိုတာ ရှားပါတယ်။ ကူညီတယ်ပဲထားဦး… ယောင်္ကျားအချင်းချင်းတော့ ခပ်ပါးပါးဆိုတော့ ပြဿနာ သိပ်ရှိမယ်မထင်ဘူး။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် အရက်မှုးတယ်ဆိုရင် မြန်မာလူမျိုး သနားကြင်နာ ကူညီတတ်တာ လူတိုင်းသိ၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးသိပဲ။ ကူညီချင်လိုက်တာများ မင်းကူညီ ငါကူညီနဲ့ ငြင်းနေမှာမဟုတ်ဘူး။ မှုးနေသော မိန်းကလေးတစ်ယောက် အတွက် ပြဿနာအများကြီး ရှိတတ်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတောင် ဖိုဓာတ်နဲ့ မဓာတ်ဟာ ဆွဲငင်မယ်တဲ့။ ဒီတော့ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ စဉ်းစားကြည့်ကြပေတော့။ အမှုးပြေမှ နင့်ကိုငါယူပြီးပြီး ဆိုတဲ့သတင်းတွေလဲ မှုခင်းဂျာနယ်မှာ မြင်တွေ့နေရတာပဲလေ။ ကျွန်မမှုးသွားလို့ ဖြစ်သွားတာပါ ဟုဖြေရှင်းချက်တွေ ထုတ်ပြီး ရုံးတိုင်တာကနောက်ပေါ့။ ထို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ရင် အမျိုးကောင်းသမီးများ အရက်မသောက်ပါနဲ့။ အထူးသဖြင့် မွေးနေ့ပွဲတွေမှာ မသောက်ပါနဲ့ဗျာ… အဓိက ပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့လို အမျိုးကောင်းသား ယောင်္ကျားလေးများပေါ့။ သောက်ပြီးရင် မှားတတ်လိုက်တဲ့ အမှားတွေ ဖြစ်စဉ်တွေ ရှိပါတယ်။ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်တွေမှာ အဖေကိုတောင် ဓားနဲ့ပြန်ထိုးတဲ့ အရက်မှုးတဲ့ သားအကြောင်းတွေကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒီတော့ ရှောင်သင့်မရှောင်သင့် မိမိကိုယ်တိုင် စဉ်းစားကြပေါ့။ ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ် အနည်းငယ်သောက်ခြင်း၊ မဖြစ်မနေ သောက်နေရခြင်းတို့မှ အပ ရှောင်နိုင်ရင် ပိုကောင်းလေပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ မြတ်ဗုဒ္ဓကတော့ မှုးရစ်စေတတ်တဲ့ အရက်မှမဟုတ်ဘူး၊ ကျန်တဲ့ မှုးရစ်စေတဲ့ ဆေးလိပ်တို့လဲ ရှောင်ကျဉ်ရန် ဟောထားပါသေးတယ်။ အဲဒီတော့ မနက်ပိုင်း ငါးပါးသီလယူပြီး ညနေပိုင်းမှာ ဒါတွေသောက်နေမလား ရှောင်မလား… ကိုယ်ကြိုက်တာကို ကိုယ်လုပ်နေမှာလား…. ဒါဆိုရင်တော့ အနန္တာ အနန္တငါးပါး ကြိုက်၊မကြိုက် ချင့်ချိန် ပယ်ရှားသင့်တာကိုပယ် လုပ်သင့်တာကိုလုပ်ပါလို့ အကြံပြုပါရစေ။
အခုမှ လိုရင်းကို စပြောရတော့မယ်… ဘာကြောင့် မွေးနေ့မှာ အရက်မသောက်ခိုင်းရတာလဲ…??? လူတွေဟာ နှစ်တိုင်းမှာ မွေးနေ့ကို ဘာကြောင့်လုပ်ရသလဲ ဆိုတာကိုပဲ အရင်စပြောပါမယ်။ မွေးနေ့လုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။
(၁) မိမိသေရမည့် ရက်နီးလာတာကို အမှတ်ရစေဖို့
(၂) မိမိကို မွေးဖွားပေးခဲ့သည့် မိခင် အသက်နဲ့ရင်းပြီး မွေးခဲ့တဲ့ ရက်ကို အမှတ်ရစေဖို့ အတွက်ပါ
မွေးနေ့မှာ မိဘအနားမှာနေပြီး မိဘစိတ်ချမ်းသာအောင် ထားပေးရပါမယ်။ ဒီလိုနေ့တွေမှာ အရက်သောက်၊ ဘီယာသောက်မှ Happy birthday လို့ အော်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်တကယ်တော့ ဘီယာခွက်တွေကိုင်မယ့်အစား စိပ်ပုတီးကိုင်၊ ဘီယာခွက်တွေ တိုက်လိုက်လို့ ထွက်လာတဲ့အသံက ကြေးစည်းသံ ဖြစ်နေရမှာပါ။ သတိပြုစေချင်ပါသည်။ အခုဒီဘက်ခေတ်မှာ လုပ်နေတာက ခွက်တိုက်လို့ ထွက်လာတဲ့ အသံက နားထောင်ကောင်းတယ် ထင်နေကြတယ်။ မဟုတ်ဘူး အဲဒါမှားနေကြတာ တကယ်တော့ သေမင်းကို လက်တို့ပြီး လာခေါ်ဖို့အတွက် အချက်ပြသံ ဖြစ်နေတာပါ။ သောက်စားမှုးရစ်ပြီး အိပ်သွားတော့ရော ဘာကောင်းလို့လဲ။ မိမိသေရမယ့်ရက် နီးလာတာကို သတိမရရင်ထားပါအုံး၊ မိဘကိုတောင် မေ့သွားတာပဲ မဟုတ်လား။ မိခင်က ၀မ်းနှင့်လွယ်ပြီး ဒုက္ခခံကာ မွေးခဲ့တဲ့ ဒီမွေးနေ့မှာ အမေ့ကိုတောင် ဦးသုံးကြိမ် မချမိတဲ့သားလောက် အဘယ်မှာ ကြောက်စရာ ကောင်းအုံးမလဲ။ ဒါကြောင့် မွေးနေ့မှာ အရက်မသောက်ခိုင်းရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်တကယ် ၀န်ခံရရင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒါမျိုးလုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ မိဘနဲ့ဝေးနေတဲ့ အချိန်မှာ နှစ်နှစ်လောက် သူငယ်ချင်းမွေးနေ့ပွဲ သွားပျော်လိုက်။ ကိုယ့်မွေးနေ့ပွဲ ပျော်လိုက်နဲ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်မိဘကို ဘယ်တော့မမေ့တတ်ဘူး။ ချစ်သူနဲ့မိဘဆိုရင်တောင် မိဘကိုပဲ အမြဲတမ်း ဦးစားပေးခဲ့တယ်။ သို့သော် အဲလိုမွေးနေ့တွေတော့ ပျော်နေမိတာ အမှန်ပါပဲ။ မကောင်းမှုတွေ လုပ်ခဲ့မိတာကို အခုနောက်ပိုင်းမှ နားလည်လာရတယ်။ ဒီတရားစာပေတွေ ဗုဒ္ဓတရားတွေသာ မရှိရင်လေ ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်သူက အမှန်ရောက်စေအုံးမှာလဲ။ ဒါကြောင့် ငါတို့ဗုဒ္ဓသည် ကယ်တင်ရှင်မဟုတ်၊ ဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်၊ လမ်းမှန်ရောက်အောင် လမ်းပြပေးတဲ့ ဘုရားဆိုတာကို သိလာရတယ်။ ဒါကြောင့် ကျေးဇူးရှင်ကို ကျေးဇူးသိတတ်သလို နေထိုင်ရမယ်လို့ ဆရာတော်တွေက ဟောကြားတော်မှုတာပေါ့။ ထိုအထဲတွင် မိဘသည် အရေးကြီးဆုံးသော မိမိဘ၀၏ ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သည်။ မိဘနဲ့နီးနီးကပ်ကပ် နေရသည်ဖြစ်စေ၊ မနေရသည်ဖြစ်စေ မိဘတန်ဖိုးကို သိတတ်ကြပါစေ၊ မိဘတွေက သားသမီးတွေကို နားလည်မှု ပေးနိုင်သလို သားသမီးတွေက မိဘတွေကို နားလည်မှုရှိတတ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
တစ်နှစ်မှာတစ်ခါ ကျရောက်လာတဲ့ ဒီမွေးနေ့ပွဲတွေမှာ အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ အချက်နှစ်ချက်ကိုလည်း မမေ့နဲ့။ လျှောက်ရမဲ့လမ်းကိုလည်း မရပ်တန့်ပါစေနဲ့။ မိဘရဲ့ အရိပ်အာဝါသအောက်မှာ နေချင်ပေမယ့် အရွယ်ရောက်ကတည်းက ဘ၀ဇာတ်ခုံပေါ်တက် ကျရာအခန်းက ပီပြင်အောင် ကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင် နေရလို့ အမေအဖေတို့ အနားမှာမရှိပေမယ့် အချိန်တိုင်းမှာ သတိရနေပါတယ်။ အဖေနှင့်အမေ…. သားတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရား ချမှတ်ပေးထားတဲ့ ဇာတ်ညွန်းက “မကောင်းမှုကိုရှောင် ကောင်းမှုကိုဆောင် ဖြူအောင်စိတ်ကိုထား” လို့ ဟောကြားတော် မှုခဲ့တယ်။ ဒီလမ်းစဉ်ကို ကျင့်သုံးရင်းနဲ့ မိဘကျေးဇူး ဆပ်နိုင်သော သားတစ်ယောက် အဖြစ်သို့ ရောက်ရပါလို၏ အရှင်ဘုရား…။
ကောင်းပါတယ်... မိဘကျေးဇူးသိတတ်တော့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်တာပေါ့။ အားပေးလျှက်နေပါတယ်....